Global Voices teny Malagasy » “Tondroina hisolotena zaratany ny vehivavy, ka masina ny vehivavy noho izany” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2018 5:26 GMT 1	 · Mpanoratra Yessica Paola Izquierdo Nandika Naomy
Yessica Paola Izquierdo dia mpitarika Arhuacan ary ao anatin'ny Komity Mpanolotsaina Ara-Kolontsaina ao amin'ny Mamos . Izao manaraka izao dia fandikantsoratry ny lahatsary etsy ambony momba ny famakafakan'i Yessica amin'ny zavonteny amin'ny voambolana “Sierra Nevada,” andian-tendrombohitra iray  ao Colombia izay fonenan'ny vondrom-piarahamonina tompotany maro.
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 ka hatramin'ny Avrily 2018 hita nanonona “Sierra Nevada” (tandavan-tendrombohitra any Colombia) ao anaty lahatsoratra miisa 1187 ao anatin'ny angona Media Cloud dimy amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny espaniola. (Mijery sary lehibe kokoa )
Amin'ny maha-vehivavy ahy, mihevitra aho fa tokony asongadina ny anjara toeranay, ny ilàna anay ary izay maneho anay. Manana anjara toerana goavana izahay vehivavy Arhuaco. Tondroina ho misolotena zaratany ny vehviavy, izay no izy, inona no anehoana ny zaratany, ka dia masina ny vehivavy. Vehivavy no mizànan'ny lehilahy, manome ilay fandrisihana ara-panahy ho an'ny lehilahy mba hahatontosa ny nofinofin-dry zareo.
Mba te-hahatontosa ny nofinofinay ao amin'ny fiainan-tokatranonay ihany koa ny vehivavy tompotany, ary amin'izay lalana izay ihany, manana ny anjara toeranay izahay amin'ny fanofahofana miaraka izay zava-dehibe aminay satria ny fanofahofana dia midika fisaina, midika zaratany, midika ny nofinofinay, midika ny fisainanay. Ka noho izany dia tena zava-dehibe aminay ny manasongadina ny asan'ny vehivavy.
Inona ny voambolana na teny tokony ho zavonteny idealy maneho ny vahoaka Arhuaco ao amin'ny fampitam-baovao?
fijerin'ny Arhuaco izao tontolo izao
Mahazavadehibe ny zaratany
Fiarovana ny Sierra Nevada
Ity dia ao anatin'ny andiana Rising Frames norafetin'i Mónica Bonilla , izay nanomana sy nanamora ny atrikasa notontosaina tamin'ny 18 May 2018 tao amin'ny Center of Internet and Society  tao amin'ny Del Rosario University -ISUR- ao Bogotá, Colombia izay nitondra miaraka ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina tompotany Arhuaco sy Wayuu handray anjara amin'ity asa fomba fitantarana nomerika ity.
Nanatrika tamin'ny fandikana an-tsoratra sy ny fandikanteny, izay nahitsy hazava sy amin'ny halavany i Mónica Bonilla.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/31/120375/
 andian-tendrombohitra iray: https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta